VIDEO: Daawo Heesta Every Night And Day Ee Ay Qaaday Gabadha Lagu Xanto Inuu Jecel Yahay Salman Khan Ee Iulia Vantur - Hablaha Media Network
VIDEO: Daawo Heesta Every Night And Day Ee Ay Qaaday Gabadha Lagu Xanto Inuu Jecel Yahay Salman Khan Ee Iulia Vantur
HMN:- Muuqaal kooban ayaa laga soo bandhigay heesta sida weyn loo sugayo ee Every Night And Day taasoo ku jirta albunka #AapSeMausiiquii isla markaana ay codadkooda ku qaadayaan Himesh Reshammiya iyo Iulia Vantur.
Gabadha lagu xanto inuu jecel yahay Salman Khan ee u dhalatay dalka Romania Iulia Vantur ayaana waxay qaaday heesteedii ugu horreysay ee afka Hindiga iyadoo kaashaneysa Himesh Reshammiya, waxaana iska cad inay ka baxsatay 36 sanno jirtaani.
Sida ay u muuqato, Iulia si wanaagsan ayey ku bilaabatay xirfaddeeda muusiga ee dhanka Bollywood. Modelka u dhalatay dalka Romania ayaana hab cajiib ah ugu heeseysa afka Hindia. Sidoo kale qaabka ay hikaadda erada ay keeneyso ayaa cajiib ah.
Sidoo kale Himesh Reshammiya oo ka mid ah fannaaniinta xilligaan ugu wanaagsan Bollywood ayaa wuxuu awooddiisa iyo codkiisa qurxoon kusoo bandhigay heestaan. Halkaan hoose ayaadna ka daawan kartaa muuqaalkaan kooban iyadoo dhowaan lasoo bandhigi doono muuqaalka heesta oo dhammeystiran.